Ahoana ny fomba hanafarana ny kinova feno amin'ny vokatra? - DataNumen
Ho an'ny vokatra tsirairay dia misy kinova demo maimaim-poana, izay azo sintonina avy ao amin'ny pejy fandraisan'ny vokatra amin'ny alàlan'ny fanindriana ny “Fampidinana maimaimpoana” bokotra.
Ny kinova demo dia ho ara-dalàna TSY avoaka ny rakitra raikitra, na apetraho fetra sasany amin'ny fisie raikitra. Raha te hahazo ilay rakitra na manafoana ny fetra dia mila tsindrio ilay "Hividy izao" bokotra hanafarana ny kinova feno.
Manaiky izahay kara-trosa lehibe rehetra, Maestro (UK), giropay (Alemana), iDEAL (Netherlands), famindrana banky / tariby, WebMoney, baiko mividy, PayPal, Checks, Direct Debit ary Fax / kaonty finday.
Raha toa ka liana amin'ny fahazoan-dàlana ny vokatray ho an'ny mpampiasa maromaro ny orinasanao na ny andrim-pianaranao dia afaka mahazo fihenam-bidy ianao ary mitahiry vola be amin'ny fividianana lisansa marobe miaraka.
mividy, kinova demo, feno version, mba, levitra
Navoaka tamin'ny May 13, 2021